Iingcamango zeTattoo kwiNgingqi yeSpine | Ukuzoba
Iitattoos kwindawo yomqolo
Susana Garcia | | Iitatoo, Iitattoos ngasemva
Kuxhomekeka kwifayile ye- indawo yomzimba apho siza kufumana i-tattoo, siya kuphefumlelwa yenye okanye ezinye iimodeli. Kukho iitatto ezibonakala zilungile ngokuthe nkqo kwaye ezinye ngokuthe tye. Uyilo lubalulekile, kuba kuya kufuneka uthathele ingqalelo indawo oza kuya kuyo kwaye siza kuyibona njani kuloo ndawo ithile.
Ukuba uthanda ukunxiba ii-tatoo kwezi ndawo zomzimba uzilibaleyo, uya kuyithanda ke imbono yokufumana umvambo kwindawo yomqolo. Lo mmandla ubuthathaka, kodwa kuyenzeka ukuba wenze iitattoos ezintle ezilinganayo kakhulu. Kukho izimvo zazo zonke izinto ozithandayo.
1 Iitattoo kumqolo
2 Iitattoos ezinamabinzana
3 Iitattoo zeentyatyambo
4 Iitatto ezincinci
5 Iitatoo zoqobo
6 Iitattoo zenyanga
7 Iitolo zetolo
Xa kuziwa ekufumaneni itattoo kwindawo yomqolo, kufuneka sigcine ezinye izinto engqondweni. Njengomzekelo inyani yokuba kwikholamu zinokwenziwa ezinye iimvavanyo zococekonjengokugqabhuka kwe-lumbar okanye i-epidural, engenakwenzeka ngenxa yomvambo. Kufuneka sihlale sijongana neengxaki ezingasinika zona kwangaphambili. Nangona kunjalo, ukuba umvambo mncinci awusoloko uphazamisa kwezo ndawo. Kufuneka kuthiwe yindawo ebuthathaka apho iintlungu ziphezulu, ke kuya kufuneka uqaphele.
Ikholamu yindawo entle onokukwazi ukuyenza yongeza ibinzana elide oko kubalulekile kuthi. La mabinzana ahlala ebekwe nkqo kwaye anokuhamba wedwa okanye ngeenkcukacha ezincinci ukuzifaka. Kwezi tattoos ziyilelwe abasetyhini, zongeze ezinye iintyatyambo ngaphezulu, ukuze itattoo igqibelele ngakumbi. Iintyatyambo zinokuba ziindidi ezininzi, zimhlophe kwaye zinombala, kunye noyilo oluninzi lokukwazi ukubekeka eli binzana lihle. Njengoko sibona, umphumo ubuthathaka kwaye ungowokuqala.
Las iintyatyambo zinokuba ngumvambo olungileyo yendawo yangasemva, njengoko ubume bayo bulungele le ndawo. Isiqu sinokwenziwa kunye nekholamu, kunye nemibono emihle kunye nexesha langoku. Sibuyele kweso sitayile apho bajongeka njengemizobo ye-watercolor endaweni yeetattoo. Iintyatyambo zifumana imibala ukubonisa bonke ubuqaqawuli bazo.
Nangona uninzi lweetattoo zomqolo zinoyilo olukhulu nolubanzi, inyani kukuba kunokwenzeka ukuba uthathe ithuba loku indawo yokwenza iitattoos ezincinci. Inye kunye nabalinganiswa bakaPeter Pan, ifashoni kakhulu, luyilo olukhulu oluvusa ukubuyela ebuntwaneni. Sikwabona uyilo oluncinci lotolo, olungumkhwa kwiitatto zangoku. Yinkcukacha yesitayile sobuhlanga esijongeka silunge kakhulu kulingano lwaso kunye nokuba ngumzobo omde.
Ngasemva ungenza ezininzi iiTatoo zoqobo ukuhombisa indawo yekholamu. Ezi zibini ziyamangalisa. Sinesigcawu esibonakala ngathi sehla sivela kwindawo yentloko. Kananjalo neengcambu zomthi, ezibonakalisa ukuba sezintloko zethu.
Ezi ezinye iitatoo zithathe ithuba lobude bomqolo weyona tattoos imangalisayo. Omnye wazo Ulingisa ikhonkco le-DNA omnye usibonisa indlulamthi. Kucacile ukuba uyilo olukhoyo lohluka kakhulu kwaye sinokufumana zonke iintlobo zeembono ezikhoyo, nganye nganye ibe yeyentsusa.
Las iinyanga neenguqu zabo Inokuba yenye yeetattoos ezisetyenziselwa indawo yomqolo. Inyanga ibisoloko inento ethile eyichukumisayo yokucinga, ngenxa yoko inokuba ngumbono omkhulu ukufumana tattoo. Ngamanye amaxesha sibona imilo yejiyometri enesangqa kunye nemigca, kuba ijiyometri ifashoni kakhulu kwiitattoos.
Njengoko besitshilo ii-tatoo zetolo kakhulu yangoku kunye nefashoni. Basinika uyilo olukhulu lwale ndawo, kunye nemigca ethe ngqo kwikholamu. Kule ntolo ungongeza iinkcukacha ezininzi, zihlala kwisitayile sobuhlanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitatoo » Iitattoos kwindawo yomqolo
Swallow tattoos emlenzeni, ingqokelela yoyilo
Ukuloba iitatoo, ukuqokelelwa kunye nenkcazo yentsingiselo yazo